January 19, 2022 - Online Hartha
ဘယ်လောက်ပဲတော်နေပါစေ သမီးမိုက်မဖြစ်စေနဲ့ ( အရမ်းကောင်းလို့ဖတ်စေချင်)
သမီးမိုက်မဖြစ်စေနဲ့ ( အရမ်းကောင်းလို့ဖတ်စေချင်) စာဖတ်မပျင်းပါနဲ့ ဖတ်ကြည့်စေ ချင်ပါတယ် ။ ညီမလေး တို့ရေ ဆင်းရဲတဲ့ လင်မယား ၂ ယောက်မှာ စာတော်တဲ့ သမီးလေး ရှိတယ် ၊ တစ်နေ့ သမီးလေးဟာ အတန်းတင် စာမေးပွဲမှာ ပထမ ရတယ် ။ အဖေဟာ ဝမ်းသာလွန်း လို့ လိုချင်တာဝယ်ပေးမယ် ပြောတယ် ။သမီးလေးဟာ သိပ်လိုချင်ခဲ့ပေမဲ့ အဖေမှာ ပိုက်ဆံ မရှိမှန်းသိလို့ မပူဆာခဲ့တဲ့ အဝတ်အစား တစ်စုံကိုလိုချင်တယ်လို့ ပြောလိုက် တယ် ။ နောက်တစ်နေ့မှာ အဖေဟာ သမီးလေး လိုချင်တဲ့ အဝတ်တစ်စုံကို ပေးလိုက် တယ် ၊ သမီးလေးဟာ ဝတ်ကြည့်ပြီး မှန်ရှေ့မှာ ပျော်လို့ ၊ အဖေ ကလည်း … Read more
ရင်ခွဲရုံမှာ သေလူတစ်ယောက်ဆီက လက်စွပ် ချွတ်မရလို့ ချွတ်ပေးဖို့ အကူအညီဖုန်းဝင်လာသောအခါ
တနေ့က မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးက ရင်ခွဲရုံမှာ သေလူတယောက်ဆီက လက်စွပ်ချွတ် မရလို့ ချွတ်ပေးဖို့ အကူအညီဖုန်းဝင်လာခဲ့တယ်။ ကူညီပေးမယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘက်ကလည်း အကြောင်းပြန်ပေးလိုက်တယ်လေ။ရင်ခွဲရုံရောက်သွားတော့ အေးစိမ့်နေတဲ့အခန်းထဲမှာလည်းသေလူတွေ အစီအရီနဲ့ပေါ့။ ကိုယ်ကတော့ ရင်ခွဲတဲ့ကျောက်ကုတင်ကြီးပေါ်က ရင်ဘတ်ဟောင်းလောင်း အေးစက်စက်နဲ့သေလူရဲ့လက်ကို ကိုင်တွယ်လို့ အထိအခိုက်မရှိအသပ်ရပ်ဆုံးချွတ်ပေးခဲ့ရတာပေါ့။ အဲ့လိုနဲ့ အသိတခု ခေါင်းထဲရောက်ခဲ့ရတယ်။တကယ်တော့ ဘုရားဟောတရားလိုပါပဲလား သေတဲ့အခါ ပါသွားမှာကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ အကုသိုလ် တွေပါပဲ။ တခြားအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းမှန်သမျှ ထားခဲ့ရမှာချည်းပါပဲ။ရှင်ချိန်မှာ လောဘ ဒေါသ မောဟမာန်မာနတွေ သံသယတွေနဲ့ တကယ်တမ်း လက်တွဲတွေဖြုတ်ကြရတော့ အကုန်ထားခဲ့ရပြီး ပြာဖြစ်သွားရတာပါပဲ။ ချစ်ကြပါမာန်မာနတွေလျှော့လို့ သံသယတွေ ဖျောက်ပစ်ကြစမ်းပါ။ရှင်ခြင်းက အစိုးမရပါဘူး သေခြင်းသာ တကယ်ကြုံရမှာပါ။ မိတ်ဆွေ အသက်ရှင်စဉ်မှာ… ချစ်နိုင်သမျှ ချစ်ပေးပါနော်…နောက်ပြီး..ခွဲခွာနိုင်ဖို့လည်း.အသင့်ပြင်ထားပေးပါ..။ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေဟာ…ကိုယ့်အနားမှာ အမြဲရှိနေမှာ သေချာရဲ့လား.. သုသာန်မှာ..ခေါင်းတိုင်ကထွက်လာတဲ့ မီးခိုးတွေ ကုန်ဆုံးသွားချိန်… ဘဝတစ်ခုဟာ..အပြီးသတ်သွားတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ချစ်သော ဇနီး/ခင်ပွန်း/သားသမီး/မိဘ/မောင်နှမ … Read more
ရှေးအခါက တောင်သူဦးကြီးများ မှတ်သားခဲ့ကြတဲ့ မိုးရွာမည်ကို ကြိုသိသောသူ (၈)ဦး
ရှေးအခါက တောင်သူဦးကြီးများ မှတ်သားခဲ့ကြတဲ့ “မိုးရွာမည်ကို ကြိုသိသောသူ (၈) ဦး မိုးရွာမည်ကို ကြိုသိသောသူ (၈) ပါး” ရှေးအခါက တောင်သူဦးကြီးများသည် မိုးရွာမည်ကို သိသောသူ (၈) ပါးကို မှတ်သားထားကြသည်။ ထိုရှစ်ပါးမှာ.. “စောင်းဆရာနှင့် ယားနာ၊ ပွေးကွက်၊ ပါဒရက်က၊ ပုရွက်၊ ပလူ၊ အနူ၊ ပြဒါး ပေါင်းရှစ်ပါး မိုးရွာမည်ကို ကြိုသိသူ” ဟု မှတ်သားခဲ့ကြသည်။ ၁။ စောင်းဆရာ – ‌စောင်းဆရာသည် မိမိစောင်းကြိုးများ တင်းနေသည်ကို တွေ့၍ မိုးရွာတော့မည်ဟု ကြိုသိလေသည်။ မိုးရွာတော့မည့်အခါ စောင်းကြိုးများ တင်းနေကုန်သည်။ ၂။ ယားနာ – ယားနာရှိသောသူသည်လည်း မိုးရွာမည်ကို ကြိုသိလေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မိုးရွာတော့မည့် အခါတွင် မအားရအောင် ယားနာများကို … Read more
တနိုငျတပိုငျ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျကိုငျလိုသူမြားအတှကျ အရငျးနညျးနညျးနဲ့စတငျနိုငျမယျ့လုပျငနျးမြား
တနိုင်တပိုင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် အရင်းနည်းနည်းနဲ့စတင်နိုင်မယ့်လုပ်ငန်းများ… ဝန်ထမ်းလစာကို အတော်အသင့်စုမိပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးစတင်လည်ပတ်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် တနိုင်တပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒေါ်လာဈေးတက် ရွှေဈေးတက်နေတဲ့အချိန်မှာ မိမိလက်ထဲ ပိုက်ဆံတွေ စုပြီး ကိုင်မထားချင်ဘူး ရွှေတွေ ဒေါ်လာတွေ လည်း မဝယ်ချင်တဲ့အပြင် စီးပွားရေးပဲ လုပ်ကိုင်လိုသူတွေအတွက် ဦးစားပေးစဉ်းစားသင့်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ တနိုင်တပိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၂၁ မျိုးကတော့ (၁) ပင်မင်း၊ အဝတ်လျော် အိမ်အရောက်ပို့ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၊ (၂) ခွေးထိန်းသိမ်း၊ သန့်ရှင်း နှင့် အစားအစာ ( ခွေးဟိုတယ်) လုပ်ငန်း၊ (၃) ရေခဲမုန့်၊ သစ်သီးဖော်ရည် တွန်းလှည်း (၄) ဆင်းကဒ် နံပါတ်အလှ ဝယ်/ရောင်း၊ (၅) အုတ်စက်လုပ်ငန်း ၊ (၆) အွန်လိုင်း … Read more
ခုကစပြီး ထုံးတို့ မီးသွေးတို့ မျှစ်တို့များ ဘယ်တော့မှ ဈေးမဆစ်မိပါစေနဲ့တော့နော်…
ကိုယ့်အဖေလည်းပြောဖူးတယ်..ထုံးတို့မီးသွေးတို့ မျှစ်တို့များဘယ်တော့မှ၊ ဈေးမဆစ်ပါနဲ့သမီးရယ်တဲ့ မဝယ်နိုင်ရင်မဝယ်ပဲနေလိုက်ပါတဲ့..ထုံးဖုတ်မီးသွေးဖုတ်အလုပ်ဆိုတာပူပူလောင်လောင်နဲ့ လုပ်ကိုင်ရလို့..သိပ်ပင်ပန်းဆင်းရဲကြတာ ကိုယ်ချင်းစာပါသမီးရယ်တဲ့.. ”မဆစ်နဲ့”မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) နဲ့ပက်သက်လို့ ဖေဖေ့စိတ်ထဲမှာစွဲသွားတာလေးတခုက “မဆစ်နဲ့” ဆိုတဲ့ စကားလေး သမီးရဲ့။ ဟုတ်တယ် သူပြောဖူးတယ်…… ” မဆစ်နဲ့”လို့။ခရီးတစ်ခုတော့ ခရီးတစ်ခုပဲ သမီးရဲ့။ မကွေးဘက်လား၊ မုံရွာဘက်လား၊ဒါမှမဟုတ် မတ္တရာဘက်လား၊ ဖေဖေကောင်းကောင်း မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဝေးပြေးကားကြီးနဲ့သွားကြရာက..တစ်နေရာ ကားခဏထိုးရပ်လိုက်တဲ့အခါရေသန့်ဘူးရောင်းတဲ့ ကလေးမ ကလေးတစ်ယောက် ကားအနားကို ကပ်လာပါလေရောလို့ ဆိုပါတော့။ ရေခဲစိမ်ထားလို့ထင်ပါရဲ့၊ သူ့လက်ထဲက ရေသန့်ဘူး သုံးလေးဘူးဟာ ရေတွေသီးလို့..ခြစ်ခြစ်တောက်အောင်ပူတဲ့ အညာနေရဲ့ အောက်မှာ “ရေသန့်ဘူး၊ ရေသန့်ဘူး”ဆိုတဲ့ အသံလေးဟာ စာနေတာပဲ။ နဂိုမူလ ညိုတဲ့အသားကလေးဟာ နေအရှိန်မှာ ခြောက်နွမ်းလို့ပေါ့။ထုံးစံအတိုင်း ဆရာချစ်ဦးညိုက ရေသန့်ဘူးဝယ်ဖို့ ပြင်ဆင်ပါတယ် ဟဲ့ သမီးလေး ရေသန့်ဘူး ဘယ်လောက်လဲ ဘာညာပေါ့။ ကလေးမကလေးက … Read more
အဘိုးနဲ့အဘှားအိုက ပေးတဲ့တနျဖိုးဖကျြမရတဲ့ သငျခနျးစာ
အဘိုးနဲ့အဘွားအိုက ပေးတဲ့တန်ဖိုးဖျက်မရတဲ့ သင်ခန်းစာ… လူငယ်လင်မယားနှစ်ယောက် ဟာ..အိမ်ထောင်ကျစကတည်းကရက်ခြားဆိုသလို ရန်ဖြစ်လေ့ရှိကြတယ်။ တဲ့အခါလူငယ်က အရမ်းစိတ်ပျက်လာပါတယ်။တစ်နေ့ သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီး.. စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အိမ်ရှေ့မှာ တစ်ယောက်တည်း ထိုင်နေရင်းအိမ်ရှေ့အိမ်က အသက်အရွယ်အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ လင်မယားနှစ်ဦး အိမ်ထဲကရီရီမောမော နဲ့ထွက်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ သူဟာ နေ့တိုင်းထိုအဘိုးအဘွားလင်မယား နှစ်ဦးကိုသတိထားပြီး စောင့်ကြည့်မိတော့တယ်.. နေ့တိုင်းဆိုသလိုပဲထိုအဘိုးအဖွားလင်မယားနှစ်ဦးမနက်ဆိုလမ်းလျှောက်ထွက်ရင် လက်ချင်းချိတ်ပြီး သွားကြတယ်။အပြန်ကျရင် အဘိုးက ခြင်းတောင်းလေးဆွဲပေးရင်းအဘွားက အဘိုးလက်မောင်းလေးကို တွဲလာရင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဈေးဝယ် ပြန်လာကြတာကို နေ့စဉ်ဆိုသလို တွေ့ရဖန်များလာတော့လူငယ်က တစ်နေ့မနေနိုင်တော့ပဲ …အဘိုးတစ်ဦးတည်း အိမ်ရှေ့မှာ ရှိနေစဉ် သွားနှုတ်ဆက်ရင်းသူသိချင်တာလေးကို မေးလိုက်တော့တယ်။ ”အဘိုးတို့ လင်မယားကြည့်ရတာအမြဲလိုလို ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ပျော်ရွှင်နေလိုက်ကြတာကျွန်တော်တို့ကျတော့ ယူပြီးကတည်းကဖြစ်လိုက်ကြတဲ့ ရန်တွေ။ အဘိုးနဲ့အဘွား ရန်မဖြစ်ပဲ အေးအေးချမ်းချမ်း ဘယ်လိုနေကြလဲ သိချင်လို့ပါ”ဆိုတော့ အဘိုးက .. “မင်းတို့လင်မယားနှစ်ဦးစလုံးကအရမ်းကောင်းတဲ့သူတွေမို့ ရန်ဖြစ်နေကြတာ၊ … Read more
အကြွေး မြန်မြန်ပြန်ရအောင်၊ ပိုက်ဆံ များသူ့အလိုလို ဝင်လာစေသော အဆောင်ကောင်း
ဒီ ယတြာလေး နဲ့ အကြွေးမြန်မြန်ပြန်ရအောင်လည်းလုပ်လို့ရသလို၊ ဝင်ငွေ တိုးပွားအောင်းလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဝင်ငွေလည်းသိသိသာသာတိုးပွားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။လုပ်ရမယ့် နည်းလေး က လွယ်ပါတယ်။ ဘာနေ့ သားသမီး မဆို ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဘေးဥပါဒ် တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါဘူး။ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်နိုင်ရင် ပိုအစွမ်းထက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက် ၇ နာရီမှ ၇နာရီခှဲအတှငျး မိမိ အိမ် ဘုရား(သို့)ဆိုင်ဘုရားရှေ့မှာ ပိုက်ဆံ အရွက်ကြီးတစ်ရွက် (ဥပမာ-5000တန်-10000တန်)ကို ကြေးလင်ဗန်းပေါ်မှာဖြန့်၍တင်ပါ။ ပိုက်ဆံ အပေါ်မှာ ကိုကာကိုလာ ပုလင်းတစ်လုံးကို အဖုံးဖွင့် ၍ ပိုက်တပ်ပြီး တင်ပါ။ ပုလင်း ရဲ့ဘေးမှာ(ပိုက်ဆံပေါ်မှာဘဲ) သံလိုက်တုံးတစ်ခုကို တင်ပါ။ အဲဒီဘေးမှာ ဖာလာစေ့ ၉ စေ့ကိုတင်ပါ။ ပြီးလျှင်ဘုရားကိုလှူ ပါ။လှူ ပြီးလျှင်ဆုတောင်း ပါ။ ပိုက်ဆံ တွေ အများကြီး သူ့ဖာသူဝင်လာပါစေ!မမျှော်လင့်ဘဲ အများကြီးရပါစေဟု ဆုတောင်း … Read more
အိမျမှာစိုကျရငျ လူခိုကျတတျသညျ့ ဂမုနျးပငျ ၃ မြိုး
အိမ်မှာစိုက်ရင် လူခိုက်တတ်သည့် ဂမုန်းပင် ၃ မျိုး အိမ်မှာစိုက်ရင် လူခိုက်တတ်သည့် ဂမုန်းပင်(၃)မျိုးဂမုန်းဆိုတဲ့ အပင်မျိုးနွယ်လေး ကတော့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်သိပ်မစိမ်းတဲ့ အပင်တစ်မျိုး ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ဥရှိတဲ့ အပင်များစွာကို ဂမုန်းလို့ခြုံငုံခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့ တချို့ဂမုန်းပင်တွေက အပင်ကြီးတွေ မှာတွယ်က ပ်ပေါက်တက်တဲ့ အပင်မျိုးဖြစ် ပါတယ်။ ရှေးခေတ် ကမြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ဂမုန်းပင်လေးတွေကို စီးပွားလာဘ်လာဘ တိုးတက်ဖို့၊ရာထူးအာဏာတိုးတက်ဖို့ ၊ဧည့်ကောင်းဆောင်ကောင်းလာဖို့ ၊မီးကွင်းဖို့၊သူခိုးဓားပြအန္တရာယ် ကင်းဖို့ ဆိုပြီးခြံဝန်းထဲ မှာစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသလို အခုခေတ်မှာတော့ အိမ်တွင်းအပင်လေးတွေ အဖြစ်ပါစိုက်ပျိုး လာကြပါတယ်။ ဒါကပြဿနာ မဟုတ်ပေမယ့် ဂမုန်းပင်တွေထဲမှာမှ အိမ်တွင်းမှာ လုံးဝ မစိုက်ပျိုးသင့်တဲ့ အပင်တွေကလည်း ရှိနေပါ တယ်။ အဲအပင်(၃)မျိုးကို စိုက်ပျိုးရေး ဝါသနာရှင်တွေ သထိထားဆင်ခြင်နိုင်အောင်ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ် ၁။ ဆင်စွယ်ဂမုန်း ဆင်စွယ်ဂမုန်း ကတော့ … Read more
ရှေးလူကြီးများတံမြက်စည်းလှည်းနည်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်နေပြီး တကယ်ကောင်းတဲ့နည်းလေးပါ
ရှေးလူကြီးများတံမြက်စည်းလှည်းနည်းr) ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်နေပြီးတကယ်ကောင်းတဲ့နည်းလေးပါ! တံမြက်စည်းနေ့တိုင်းလှည်းနေကြတာပါ လူတိုင်း လူတိုင်း။ဒါပေမယ့် ဒီအတိုင်းလှည်းမှာထက် အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့နည်းလေးနဲ့ လှည်းမယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်လည်းရကြမယ်၊ ယတြာလေးတစ်ခုလည်းခြေပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်!လှည်းနေချိန်မှာ စိတ်ထဲမှ “ယခုလို အမှိုက်များကိုလှည်းရသော အကျိုးကြောင့် မိမိ၏စိတ်တွင်ရှိသော အမှိုက်နှင့်တူသော သူတပါးအပေါ်မကောင်းစိတ်များ၊အကုသိုလ်ကိုလိုလားသောစိတ်များ၊မနာလိုစိတ်များ အားလုံး လုံးဝရှင်းလင်း၍ မိမိဘဝတွင် အမှိုက်နှင့်တူသော သံသရာဝဠ်ကြွေများ၊သိစိတ်-မသိစိတ်များဖြင့်ကျူးလွန်မိခဲ့သော အကုသိုလ္မ်ားအားလုံး အမှုန်ကလေးတစ်စတောင်မကျန်ဘဲ ရှင်းလင်းသွားပါစေ”ဟု လှည်းနေရင်းနဲ့ ပါးစပ်မှရွတ်ဆိုပေးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အကြွေးများပေးစရာရှိတဲ့အတွက် “အမှိုက်နှင့်တူသောကြွေးမှီများအားလုံးပါ ကင်းရှင်းပါရစေ”ဟုပါ ဆုတောင်းပါတယ်။ တကယ်ထိရောက်ပါတယ်၊အကြွေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေ လာပါပြီ။ထပ်ပြီးလုံးဝအကြွေးမတင်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အဖွားကပြောခဲ့တဲ့နည်းလေးပါ။Psycho ဘက်ကကြည့်ရင်လည်း အရမ်းကောင်းတဲ့နည်းပါ! မသိစိတ္ကို အကုသိုလ်ဘက်မရောက်အောင်ထိန်းရာရောက်ပါတယ်။အကုသိုလ် တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း အလိုလိုနေရင်းမလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကဘေးကနေလာပြောနေသလိုပါဘဲ! အကုသိုလ်မလုပ်နဲ့ဟု”အမျိုးသမီးများလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ မိမိအမျိုးသားမှာအကြွေးများရှိရင် အမျိုးသားရဲ့နာမည်ကိုရွတ်ပြီးလုပ်ပေးပါ!ကျွန်တော့်အဖွားကလည်း အဖိုးအတွက် နေ့တိုင်း … Read more